Nihena ny vidin-tsolika : nidina latsaky ny 3.000 Ar ny litatry ny gazoala | NewsMada
Nihena fanindroany ny vidin-tsolika, tamin’ity taona ity. Lasa 2.810 Ar ny litatry ny gazoala raha 3.090 Ar (-280 Ar) teo aloha. Izany hoe, lasa latsaky ny 3.000 Ar. Lasa 3.460 Ar/l ny lasantsy SP 95 raha 3.550 Ar/l teo aloha (-90 Ar) ary nidina ho 2.110 Ar/l ny solitany fandrehitra raha 2.320 Ar/l (-210 Ar) teo aloha.
Vokatry ny fidinan’ny vidin’ny solika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny nahatonga izao fihenam-bidy izao. Tafidina ho 27 dolara ny vidin’ny iray barila, anisan’ny ambany indrindra tato anatin’ny 13 taona, araka ny fanadihadian’ny mpahay toekarena.
Tsy manampy intsony ny fanjakana
Eto Madagasikara, nisy fihatsarany kely ny sandan’ny Ariary miohatra amin’ny dolara, vola vahiny ividianana ny solika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena.
Nanomboka ny volana oktobra 2015 ny nampiharana ny tena vidiny mifanaraka amin’ny tsena iraisam-pirenena. Anisan’ny fepetra napetraky ny mpamatsy vola iraisam-pirenena amin’i Madagasikara ny tsy hanampian’ny fanjakana intsony ny kaompania maninjara solika, sy ny mpitatitra. Mitaraina ireto farany fa nandray fanampiana ara-bola tamin’ny fanjakana farany izy ireo ny volana aogositra 2015.